ओलीले महाकाली सन्धि गर्दा हेरेर बसेका थिए, मघेसीलाई संविधानमै वेइमानी ? — SuchanaKendra.Com
ओलीले महाकाली सन्धि गर्दा हेरेर बसेका थिए, मघेसीलाई संविधानमै वेइमानी ?
काठमाडौं, । लिम्पियाधुरा ,लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारीपछि निशान छाप परिवर्तनका लागि गर्न लागिएको संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय एकता नजुट्ने संकेत देखिएको छ । सुरुदेखी नै संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउदै आएका मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुले पछिल्लो समयमा आएर आफ्ना मागसहित प्याकेजमा संशोधन माग उठाउने भएका छन् ।
महतोले भने, ‘संविधान निर्माणको आरम्भबाटै गणतन्त्रको उपेक्षा सुरु भएको हो । पिडएिका वर्ग, जनजाती मधेशी लगायत धेरैमा यो संविधानमा वेइमानी गरिएको छ । संगै आन्दोलन गर्दा अब नेपालमा कुनै प्रकारको विभेद हुदैन भनेका थिए । तर, दुभाग्य संविधान बनाउने बेला हामीलाई पाखा लगाइयो’ । रिर्पोटस् नेपालबाट